ဆိုလာပြားများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံဖွဲ့စည်းပုံ - သတင်း - Cixi City Rixing Electronics Co., Ltd
ပြပွဲ & ဖောက်သည်များ
Monocrystalline Bifacial ဆိုလာပြား
Monocrystalline Half Cell ဆိုလာပြား
Monocrystalline Bifacial Solar Module
Monocrystalline Half Cell ဆိုလာ မော်ဂျူး
Monocrystalline Solar PV
Monocrystalline Bifacial Solar PV
Monocrystalline Half Cell Solar PV
Polycrystalline ဆိုလာ PV
နေအိမ် > သတင်း > စက်မှုသတင်း
390w Monocrystalline Bifacial ဆိုလာပြား
395w Monocrystalline Full Black ဆိုလာပြား
310w Monocrystalline Full Black ဆိုလာပြား
390w Monocrystalline ဆိုလာပြား
1) Tempered Glass
၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၏ အဓိကကိုယ်ထည် (ဆဲလ်များကဲ့သို့သော) ကိုကာကွယ်ရန်နှင့် အလင်းထုတ်လွှင့်မှုရွေးချယ်ရန် လိုအပ်သည်။ 1. အလင်းပို့လွှတ်မှုနှုန်းသည် မြင့်မားရမည် (ယေဘုယျအားဖြင့် 91% ထက်ပိုသည်); 2. Ultra-white-tempered ကုသမှု
Tempered Glass နှင့် ပါဝါထုတ်လုပ်ခြင်း၏ ပင်မကိုယ်ထည် (ဆဲလ်ကဲ့သို့သော) တို့ကို ချိတ်ဆက်ရန်နှင့် ပြုပြင်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော EVA ပစ္စည်း၏ အရည်အသွေးသည် မော်ဂျူး၏ အသက်ကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည်။ EVA သည် လေနှင့်ထိတွေ့ရလွယ်ကူပြီး အဝါရောင်ဖြစ်ပြီး module ၏အလင်းပို့လွှတ်မှုကိုထိခိုက်စေသောကြောင့် EVA ကိုယ်တိုင်၏အရည်အသွေးအပြင် module ၏ပါဝါထုတ်လုပ်ခြင်းအရည်အသွေးကိုလည်း lamination လုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်လည်းထိခိုက်ပါသည်။ module ထုတ်လုပ်သူ။ အစိတ်အပိုင်းဘဝ။
အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပင်မဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးဈေးကွက်တွင် ပင်မရေစီးကြောင်းမှာ ပုံဆောင်ခဲဆီလီကွန်ဖြစ်သည်။နေရောင်ခြည်ဆဲလ်များနှင့် အပါးလွှာသော ဆိုလာဆဲလ်များ နှစ်မျိုးလုံးတွင် ၎င်းတို့၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များရှိသည်။ အရည်ကြည်ဆီလီကွန်ဆိုလာဆဲလ်များစက်ကိရိယာ ကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးသော်လည်း သုံးစွဲမှုနှင့် ဆဲလ်ကုန်ကျစရိတ်များ မြင့်မားသော်လည်း ပြင်ပနေရောင်ခြည်အောက်တွင် ပါဝါထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ပိုမိုသင့်လျော်သော photoelectric ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်မှာလည်း မြင့်မားပါသည်။ ပါးလွှာသောဖလင်မ်ဆိုလာဆဲလ်များသည် စက်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်အတော်လေးမြင့်မားသော်လည်း စားသုံးမှုနှင့်ဘက်ထရီ ကုန်ကျစရိတ်မှာ အလွန်နည်းပါးသော်လည်း photoelectric အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်သည် ပုံဆောင်ခဲစလီကွန်ဆဲလ်များ၏ ထက်ဝက်ကျော်သာရှိသော်လည်း အလင်းအားနည်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး ၎င်းကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဂဏန်းတွက်စက်ပေါ်ရှိ ဆိုလာဆဲလ်ကဲ့သို့သော သာမန်အလင်းရောင်အောက်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား။
လုပ်ဆောင်ချက်သည် အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် ပါဝါထုတ်လုပ်သည့် ပင်မကိုယ်ထည်နှင့် နောက်ကြောင်းပြန်ပျံကို ချည်နှောင်ကာ ဖုံးအုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
လုပ်ဆောင်ချက်၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ လျှပ်ကာ၊ ရေစိုခံခြင်း (များသောအားဖြင့် TPT၊ TPE နှင့် အခြားပစ္စည်းများသည် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်သူအများစုသည် 25 နှစ်အာမခံချက်ရှိသည်၊ tempered glass၊ အလူမီနီယံအလွိုင်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပြဿနာမရှိပါ၊ သော့မှာ backplane နှင့် silica ရှိမရှိ၊ gel သည် လိုအပ်သည်များကို ရရှိနိုင်သည်။)
Laminate ကိုကာကွယ်ပါ၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးခြင်းတွင်အချို့သောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ပါ။
၎င်းသည် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်တစ်ခုလုံးကို ကာကွယ်ပေးပြီး လက်ရှိလွှဲပြောင်းသည့်နေရာတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ အစိတ်အပိုင်းသည် ဝါယာရှော့ဖြစ်ပါက၊ စနစ်တစ်ခုလုံး မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် junction box သည် short-circuit ဘက်ထရီကြိုးကို အလိုအလျောက် ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်သည်။ junction box တွင်အရေးကြီးဆုံးအရာမှာ diodes ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ စည်းဝေးပွဲရှိ ဆဲလ်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာ ဒိုင်အိုဒိတ်များလည်း ကွဲပြားပါသည်။
တံဆိပ်ခတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို အစိတ်အပိုင်းနှင့် အလူမီနီယံသတ္တုစပ်ဘောင်ကြား၊ အစိတ်အပိုင်းနှင့် လမ်းဆုံသေတ္တာကြားလမ်းဆုံကို တံဆိပ်ခတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ အချို့ကုမ္ပဏီများသည် ဆီလီကာဂျယ်အစား နှစ်ထပ်ကော်တိပ်နှင့် အမြှုပ်များကို အသုံးပြုကြသည်။ ဆီလီကွန်ကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရိုးရှင်းသည်၊ အဆင်ပြေသည်၊ လည်ပတ်ရန် လွယ်ကူသည်၊ ကုန်ကျစရိတ် အလွန်နည်းသည်။
လိပ်စာ: Jietang စက်မှုပန်းခြံ၊ Tianyuan မြို့၊ Cixi၊ Ningbo၊ Zhejiang 315325၊ တရုတ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၊ ဆိုလာပြား၊ နေရောင်ခြည်သုံး module၊ monocrystalline ဆိုလာပြားကဲ့သို့သော ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို စိတ်ဝင်စားပါက၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အီးမေးလ်ဖြင့် တိုင်ပင်နိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ၂၄ နာရီအတွင်း အကြောင်းပြန်မည်ဖြစ်သည်။
Solar Modul ၏ အမြင့်ဆုံး output power ကို မည်သို့ သိနိုင်မည်နည်း။2021/09/22
ဆိုလာဆဲလ် မော်ဂျူးများသည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ပုံဆောင်ခဲများဖြစ်သော ဆီလီကွန်ဆိုလာဆဲလ်များ၊ အလွန်ဖြူသော အထည်ဆန် ဖန်ခွက်များ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
နေရောင်ခြည်သုံး မိုနိုခရစ်စတယ်လီဆီလီကွန်နှင့် ပေါ်လီကရစ်စတလိုင်းဆီလီကွန်ကြား ကွာခြားချက်2021/09/22
A၊ monocrystalline silicon ဆိုလာပြားများနှင့် polysilicon ဆိုလာပြားများ
မူပိုင်ခွင့် © Cixi City Rixing Electronics Co., Ltd 2021 All Rights Reserved